Halyayga kooxda Real Madrid oo mustaqbal weyn u saadaaliyay da’ayarka reer Brazil Vinícius Júnior – Gool FM
Halyayga kooxda Real Madrid oo mustaqbal weyn u saadaaliyay da’ayarka reer Brazil Vinícius Júnior
(Real Madrid) 13 Okt 2018. Halyayga kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Brazil ee Roberto Carlos ayaa amaanay xiddiga da’da yar, isagoo sheegay inuu noqon doono xiddig weyn oo mustaqbal wanaagsan leh.
Roberto Carlos ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mundo Deportivo” ayaa wuxuu kaga hadlay xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Vinícius Júnior.
“Vinícius Jr wuxuu noqon doonaa xiddig weyn, laakiin waa in la siiyaa waqti, sababtoo ah weli waa da ‘yar”.
“Wuxuu heli doonaa khibrad badan ee kooxda Real Madrid ah, wuxuu u muuqdaa inuu diyaar u yahay inuu u ciyaaro kooxda koowaad”.
“Waan hubaa in dhowr sano gudahood uu muujin doono awoodiisa ciyaareed”.
Si kastaba Vinícius Jr ayaa xili adag ku soo qaatay kooxda Real Madrid xiliyadii lasoo dhaafay, kadib markii uu tababare Julen Lopetegui iska indho tiray inuu adeegiisa isticmaalo, kulamadii ay soo ciyaartay Los Blancos tan iyo bilawga xili ciyaareedkan.
"Ciyaarta hala igu daro ama waa Banad.".-"Haddii Qalad Dhoco, waxaa loo dhigaa Qofkii Dhaarta.".....(Xusuuso Ciyaarihii Caruurnimada, AQRI oo wax ku darso)